Ukushisa okuphezulu nesomiso kuya ngokuya kuvame | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Iplanethi yethu ibhekene nenani elikhulu lezimo zezulu ezimbi kakhulu. Manje ehlobo, ngokwanda kwamazinga okushisa nokuncipha kwemvula, kuqala izinkathi ezomile. Isomiso siyingozi kakhulu kubantu nasezinhlotsheni zezitshalo nezilwane.
Amanzi ayinto efanayo nempilo futhi isomiso esiya ngokuvame kakhulu, esinamandla futhi esihlala isikhathi eside sonakalisa ukulingana kwemvelo eminingi. Lesi somiso sibhebhethekiswa yimiphumela yokuguquka kwesimo sezulu emhlabeni.
1 Ukwanda kwesomiso namazinga okushisa
2 Ukubikezela ikusasa
3 Imizamo yokunqanda ukuguquguquka kwesimo sezulu ayanele
Ukwanda kwesomiso namazinga okushisa
Eminyakeni yamuva nje, ukuphakama okungokomlando kuye kwarekhodwa ngamapharamitha ahlukahlukene omhlaba ngenxa yezimo zezulu ezimbi kakhulu. Amazinga okushisa aphezulu, amazinga emvula amakhulu, isivinini somoya esibi kakhulu, njll. Ngokwesibonelo, Lo April wasendulo wawushisa kakhulu eminyakeni engu-137. I-National Oceanic and Atmospheric Administration (i-NOAA) yase-United States ikhombisa ukuthi ngo-Ephreli 2016 nango-2017 izinkinga ezimbili ezinkulu kakhulu zokushisa kolwandle emhlabeni jikelele zibhalisiwe kusukela ngo-1880. Lokhu kunencazelo yaso futhi kusekelwe ekwandeni kwe ukuminyana kwamagesi abamba ukushisa emkhathini. NgoJuni 14, 2017, ukuqoshwa komkhathi kwe-CO2 kwezingxenye ezingama-409,58 ngesigidi ngasinye (ppm) kwaqoshwa, isilinganiso esiqinisekisa ukuqhubeka kokwanda kwamagesi abamba ukushisa futhi okwenza kube yisiqongo esiphakeme kakhulu se-CO2 yasemkhathini etholwe eMhlabeni iminyaka engama-800.000.
Kumele kuthathwe kalula ukuthi ukubaluleka kokukhishwa kwegesi ebamba ukushisa okwenziwe ngumuntu kanye nomphumela wazo kwisimo sezulu akunakuphikwa. Kunezifundo ezithi ukufudumala komhlaba okwenziwe ngumuntu amandla asemkhathini ayashintsha. Lokhu kubangela imvamisa nokuqina lapho izehlakalo zezulu ezimbi kakhulu zanda khona. Amagagasi amaningi okushisa nezikhukhula eNyakatho Nenkabazwe kubangelwa ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa okubanga ukuguquka kwesimo sezulu nokufudumala komhlaba.
Ukuze ukwazi ukubikezela kahle okuzokwenzeka ngokuzayo, kudingeka izilinganiso nokubuka okunokwethenjelwa ngangokunokwenzeka. Kuyadingeka ukwazi, ngokuya ngokuhluka okuguqukayo ngokuhamba kwesikhathi, ukuthi iplanethi yethu izosithinta kanjani ngqo nangokungaqondile. Kuyasiza kakhulu ukubikezela ikusasa ukuhlaziya okwedlule. Ngenxa yocwaningo lwezinguquko esimweni sezulu esedlule, amamodeli angenziwa ukusiza ukubikezela ikusasa. Impela singazi ukuthi ukuguquguquka okuthile kwesimo sezulu kungashintsha kanjani ngenxa yokwanda kokuhlushwa kwamagesi abamba ukushisa. Ngale ndlela, singakwazi ukubikezela ukuthi bazokwenza kanjani namuhla nokuthi benzeni ukuze bagweme umonakalo omkhulu ongaba khona.
Kukososayensi ukuthi bahlole izimbangela, imiphumela, kanye nokuvela kwesimo sezulu kuwo wonke umlando woMhlaba nakusasa. Abezombusazwe, bona, kufanele balalele ongoti futhi basekele izinqumo zabo kwimininingwane yesayensi. Kepha ngaphezu kokubheka ubufakazi obukhonjiswa ososayensi, kubalulekile, ukuze kuzuze bonke, ukuthi abakushoyo kuqondwe kahle. Kodwa-ke, inqubomgomo esobala yaseMelika iphendukela empini yokugwema ukuguquka kwesimo sezulu nayo Ukuhoxa kukaDonald Trump Esivumelwaneni saseParis.
Imizamo yokunqanda ukuguquguquka kwesimo sezulu ayanele
Kuyadabukisa ukubona ukuthi imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu ibonakala kanjani nsuku zonke kanye nezinhlekelele ezidla izimpilo zabantu eziyizinkulungwane ngonyaka kepha imizamo yokumisa ukufudumala kwembulunga ayenele. Yize wonke amazwe emhlabeni athobele Isivumelwano SaseParis kumamilimitha, amazinga okushisa aphakathi nendawo azokhuphuka ngaphezu kwama-2 degrees asungulwa umphakathi wesayensi njengomkhawulo.
Izinselelo ezidalwa wukuguquka kwesimo sezulu zibalulekile futhi ziyaphuthuma. Izixazululo ziyinkimbinkimbi, phakathi kwezinye izinto, ngoba zidinga izivumelwano zamazwe ngamazwe, isenzo esisheshayo nesesikhathi eside, futhi sisebenza ngokukhululekile. Ebhekene nenkinga enkulu kangaka nokubaluleka komhlaba jikelele, ukubamba iqhaza kwabo bonke kuyadingeka, ikakhulukazi kulabo abanamakhono amaningi futhi abangasiza kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Isomiso » Amazinga okushisa aphezulu nesomiso kuya ngokuya kuba njalo